Toeram-pitsaboana | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ny torohevitra tsara indrindra momba ny fikarakarana sy ny fambolena kalendela
Ny Calendula dia heverina ho marary kokoa noho ny zavamaniry zavamaniry. Na izany aza, voninkazo-mavo sy mamiratra mamirifiry amin'ny sehatra maitso mandoza no manintona kokoa noho ny manintona. Ny kalandrie mamelana dia hijery tsara na amin'ny tarika iray, na amin'ny fambolena iray, eo afovoan'ny singa na ho rafitra.
Toe: fambolena, fiahiana, fiompiana
Ny tanimbary madinika kely iray - ny teôma, izay mandrakotra ny volon'ireo karazam-bary marevaka sy matevina, dia nahasarika ny sain'ny olona hatramin'izay. Ny Egyptiana fahiny dia nampiasa ny tantely ho an'ny tanjona ara-pitaovana. Ireo mpahay siansa fahiny (Avicenna, Dioscorides, Theophrastus) dia nanoratra momba ireo toetra mampiavaka ny thyme (antiviral, antifungale sy antibakterioka).
Ny fampiasana kalendela: ny toetra mahasoa sy ny fanoherana
Calendula dia toeram-pitsaboana, fantatra amin'ny anarana hoe marigolds medicin. Mamboly voninkazo manopy volom-borona ny voninkazo izay milalao felam-boninkazo amin'ny fambolena, saingy ny lanjany lehibe dia miorina amin'ny toetra ilaina mahasoa. Ao amin'ny fanafody amin'ny volokano, ny toetra mahasoa ny kalendela dia ampiasaina be dia be mba hanehoana aretina isan-karazany.
Inona no atao hoe soavaly mahazatra
Ny fitsaboana amin'ny ankapobeny dia mifototra amin'ny fahasamihafany sy ny fampiasany mora foana. Any amin'ny faritra rehetra, any amin'ny zaridaina na ala rehetra, dia mahita zavatra izay hanampy amin'ny ady amin'ny aretina sy ny fisorohana. Amin'izao fotoana izao isika dia hiresaka momba ireo toetra mahasoa ny soavaly mitaingina, ary koa ny fanoherana ny fampiasana an'io zavamaniry io.
Harona mahavelona amin'ny voninkazo, fampiasana zavamaniry misy poizina any amin'ny faritra samihafa
Ny ronono dia iray amin'ireo voninkazo tena mahavariana izay noforonina. Mampifandray ny tsy mifanaraka: hery sy fahalemena, tombontsoa sy fahasimbana, fiainana sy fahafatesana, fanafody ary poizina. Voninkazo mavo mahavariana no nahasarika olona ho an'ny tenany. Buttercup (Ranunculus) dia nanamarika Dioscorides (taonjato taon) teo amin'ny fitaterana azy. Ireo angano fahiny avy amin'ireo Scandinavians sy Slaves dia nanambatra ny voninkazo vita amin'ny rongony tamin'ny andriamanitra Odin sy Perun.
Fampiharana sy fanasitranana ao Monarda
Monarda dia zava-pisotro mahamay, zavamaniry ao amin'ny fianakaviana Gubotsvetnye. Ny tanindrazany dia Amerika Avaratra. Monarda dia efa nampiasaina ho fanatanjahan-tena sy fanafody. Tamin'ny taompolo XIX, io herika io dia nanjary fantatra eran-tany tahaka ny bergamot, amerikana balsama, mofomamy. Ny ahitra Bergamot dia zavamaniry isan-taona na maharitra isan-taona, fara fahakeliny sy sasany.
Hatramin'ny andro fahiny, verbena officinalis dia malaza amin'ny karazana tombony mahasoa azy. Ireo Celtic Druids dia nantsoina hoe "masina". Nampiasa mpitsabo sy dokotera i Verbena tamin'ny fitsaboana azy ireo. Ao amin'ity lahatsoratra ity dia hodinihintsika ny votoatin'ny simika, ny endriny mahazatra momba ny herisetra, ny fameperana ny fampiasana azy, ny fampiasana azy amin'ny fisakafoanana, ny famoriam-bola ary ny fitehirizana fitaovam-pambolena.
Anise: toetra mahasoa, fanoherana sy fanomanana fitaovam-pitsaboana medikaly
Anise dia zavamaniry isan-taona, mihoatra ny antsasa-metatra ambony. Ny tselatra dia ravina mahitsy sy matevina miaraka amin'ny sisin-jagged. Mivolomaka amin'ny volana jona izy io ary misy voninkazo fotsy dimy mavokely, izay mamolavola menaka manify. Amin'ny volana Aogositra, ny zavamaniry dia mamokatra voankazo kely lavalava miaraka amin'ny lava 3 mm miaraka amin'ny aroma manokana.
Ny momba ny fambolena anisika, ny fambolena ary ny fikarakarana "fanatontoloana manerantany"
Anise dia zavamaniry samihafa izay misy fofona mamy sy mamy. Ny zavamaniry, izay ampiasaina betsaka amin'ny fikarakarana, ny pharmacology, ny cosmetology ary ny fitsaboana nentim-paharazana, dia nanaja ny fananany manan-karena amin'ny olona an-tapitrisany. Ankehitriny, mamboly any amin'ny firenena rehetra manerana izao tontolo izao ny anise, any Gresy ihany no maniry.
Famokarana voan-javamaniry laurel, fomba fambolena sy fambolena katsaka
Ny ankamaroan'ny trano fandraisam-bahiny dia mety mahafantatra tsara ny ravina fofona, fa ny vitsy amin'izy ireo dia mahafantatra fa ny laurel dia tsy vitan'ny habokana fotsiny ho antsika, fa koa hazo tena mahafinaritra, izay matetika ampiasaina amin'ny tanjona ara-pambolena. Raha mandalina amim-pitandremana ireo singa rehetra amin'ny fivoarany sy ny fivoarany ianao, dia ho tsapanao fa afaka mitombo tsara ianao ao an-trano.
Ny fomba hanamboarana savoka ao amin'ny zaridaina, ny fambolena ary ny fikarakarana ny orinasa eny an-tsaha
Ny savory na ny chobre, fantatra amin'ny anarana hoe ahi-dite ihany, dia tena sempotra isan-taona, mahitsizoro sy maitso maitso, hatramin'ny 70 santimetatra. Ny ahitra misy ahi-peo dia rakotra volomparasy, ny ravina dia mitovitovy amin'ny tendron-tsindrona, maitso maitso miloko. Ny zavamaniry dia marevaka amin'ny volomparasy kely kely, mavomavo mavomavo na mavokely.
Kitapo mena sy menaka - Ahoana no anavahana ny zavamaniry?
Any amin'ny faritra ambanivohitra sy any akaikin'ny tranom-bahiny dia matetika ahitana zavamaniry mampangotrahina toy ny menaka sy balsama. Ny ankamaroan'ny olona angamba no nahalany azy ireo mihoatra noho ny indray mandeha monja, fa tsy azonao antoka fa ny zavamaniry dia eo anoloanao. Manana fisehoana sy fofona mitovy amin'izany izy ireo, izany no mahatonga ny fisafotofoto.
Karazam-peo miaraka amin'ny famaritana sy sary
Ny mena dia zavamaniry tena ilaina sy ilaina izay nampiasain'ny olona fahiny. Any amin'ny tontolo maoderina dia mangataka fanafody, mahandro, mahandro. Ny lahatsoratra dia manome fanazavana momba izay karazana vary, ary fampahalalana fohy momba ny sasany amin'izy ireo. Fantatrao ve? Araka ny lisitry ny The Plant List, ny foko Mint dia an'ny fianakaviana Luminous ary misy karazany 42 sy hybrids.
Kupena: mamboly, mitombo ary mikarakara
Koupena dia maharitra ela be izay mahatsapa tsara ao anaty alokaloka, izay midika fa mety ho ampy tsara amin'ny zaridaina matevina izany. Ny lakandrano any an-dohasaha (ny faharoa dia kupeny) dia tsara indrindra amin'ny fananganana drafitra ao anatin'ny tontolo voajanahary, indrindra rehefa mandinika ny fahafahan'ny zavamaniry haniry haingana. Amin'ny ankapobeny dia misy karazana kupen 50 eo ho eo, ary ny karazany samihafa dia tsy mitovy amin'ny loko sy ny endriky ny voninkazo, fa koa amin'ny haben'ny kirihitra (ohatra, ny karazana Shinoa goavam-be dia lehibe amin'ny 120 cm).
Inona moa ny mainty hoditra mahasoa, ny fanasitranany ary ny fahasimbana
Ny ovy, voatabiha ary ny atody, izay mahazatra antsika amin'ny fiainana andavanandro, dia anisan'ireo karazana saha sivy amin'ny karazam-boankazo isan-taona, fantatra amin'ny hoe herbed. Ny solontenam-panjakana manan-danja amin'io vondrona lehibe io dia ny volo mainty, izay nahitana ny fanasitranana ho an'ny mpanasitrana efa ela, hatramin'ny andron'ny Hippocrates, ary ny tsy fahampian'ny mpitsabo ihany koa.
Ahoana no hampitombo ny lovam-panahy ao amin'ny firenena
Fitiavana toy ny orin-jiro dia tsy dia liana firy, saingy toy ny voankazo mamy sy fanafody efa fantatra ela. Ny tsiron-tsakafo sy ny tsiron-tsavony amin'ny lovia dia mitovy amin'ny seleria. Description lovage Ho an'ny fomba fijery lovay, ny Frantsay dia miantso azy io hoe sela foxy. Ny ravin'ny zavamaniry dia tena mitovy amin'ny kambana: glossy, mavo maranitra marevaka misy ravina mirongatra boribory maromaro.
Barberry: fananganana, fampiasana, toetra mahasoa sy ny fanoherana
Barry eo amin'ny zaridaina sy zaridaina dia zatra ankehitriny. Ny mpikarakara ny garderie dia tsy mikendry ny hiatrika ireo kirihitra marobe ary hanao izany ho zava-poana tanteraka. Barberry, ny voka-dratsiny mahasoa sy ny fifanoheran-javatra dia fantatra tamin'ny olombelona hatramin'ny ela. Anisan'ireo tombontsoa azony (tsy manalavitra ny toetran'ireo toetra hafa - dekoratif, melliferous, siramamy, sns.
Fampiharana ny toetra mahasoa sy manasitrana ny lavenona
Ash - trano fitehirizam-bokatra. Amin'ny fanafody ny folakia, ampiasao ny faritra rehetra ao amin'ilay zavamaniry: bozaka, voninkazo, voankazo ary ravina. Fanafody, anisan'izany ny lavenona, afa-tsy amin'ny aretina maro. Famaritana ny lavenona sy ny famokarana fanafody Ash - hazo avo be. Ny raviny dia manana teboka mainty. Ny ravina tsirairay dia manana ravina fito na kely.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny fanafody medikaly sy saha
Sage, na salvia - iray amin'ireo zavamaniry tena ilaina. Ny latinina dia adika hoe "mahasalama." Amin'ny fitsaboana, salvia dia ampiasaina miaraka amin'ireo zavamaniry mahazatra mahazatra toy ny kamomila sy ny kalendrie. Mora fantatra fa misy loko manga sy manitra tsara tarehy. Misy karazam-boninahitra maro, ary samy manana ny toetra sy ny endriny izy ireo.
Ny fomba hambolena sy fananganana tohatra eo amin'ny zaridaina
Kotovnik - zavamaniry iray isan-taona miaraka amin'ny fofona mahafinaritra. An'ny fianakavian'i Lambskin izany. Kotovnik dia heverina ho zavamaniry tantely tsara ary manana fanasitranana. Kotovnik: famaritana ny zavamaniry Misy karazany maherin'ny 200 mahery. Ny cat Kotovnik - iray amin'ireo solontenan'io karazana io. Manana anarana hafa koa izy - citrony catnip na catnip.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Toeram-pitsaboana